Tsy misy daty fivarotana ofisialy an'ny Apple Watch Series 7 | Vaovao IPhone
Tsy misy daty famarotana ofisialy an'ny Apple Watch Series 7
Ity dia iray amin'ireo vaovao na tsaho efa naneho hevitra herinandro vitsivitsy talohan'ny fampisehoana nataon'i Apple ny talata lasa teo. Ny orinasa Cupertino dia toa nanana olana tamin'ny famokarana famantaranandro farany ary na dia marina aza dia naseho tamin'ny besinimaro izy ireo, Tsy manana daty famarotana ofisialy izy ireo ary tsy manana daty famandrihana.
Mark Gurman tenany ihany no nampitandrina andro vitsivitsy talohan'ilay hetsika fa afaka manemotra ny fandefasana famantaranandro i Apple na manolotra tahiry ambany aza. Eny, ireo faminaniana nataon'i Gurman dia tanteraka ary ankehitriny Tsy hay ny hahafantatra hoe rahoviana no hanana ireto Apple Watch Series 7 vaovao ireto.
Ny tranokalan'i Apple dia manamarika ny fararano ho toy ny fiandohan'ny varotra
Ao amin'ny tranokala Apple dia azonao atao ny mahita fa tsy misy daty voatondro ho an'ny maodely Series 7 ary milaza izy ireo fa hanomboka amin'ny fararano ny varotra. Mety alohan'ny faran'ny volana septambra na ny faran'ny an'ity dia afaka mitahiry izy ireo nefa avy eo ilaina ny manamarina ny tahirin'ny vokatra azony. Raha tara amin'ny famokarana izy ireo dia mety tsy hisy maodely be loatra amidy rehefa manomboka izy ireo.
Amin'izao fotoana izao dia miandry ary ireo izay vonona ny hanova ny Apple Watch taloha dia tsy maintsy manam-paharetana kely kokoa mandra-pivoak'ireo modely vaovao. Aza adino fa ho afaka amin'ny loko dimy sy ireo izy ireo ny vidin'ny varotra dia mety hitovy amin'ilay iray ananantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny Series 6, avy amin'ny 429 euro raha mijery ny vidiny voalaza ao amin'ilay hetsika isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Tsy misy daty famarotana ofisialy an'ny Apple Watch Series 7
Sonos Beam miaraka amin'i Dolby Atmos dia zava-misy ankehitriny